IMicrosoft OneDrive sele isebenza ngokwemveli kwiMac M1 | Ndisuka kuMac
IMicrosoft OneDrive ngoku isebenza ngokwemveli kwiiMac M1s
UManuel Alonso | | Ezinye iiNkqubo zeMac
emva kwenye linda inyanga Ukusukela oko kwakhutshwa inguqulelo yeBeta yeOneDrive yeeMacs eneM1, sele sinaso isicelo esifumaneka ngokupheleleyo kubasebenzisi. IMicrosoft isigcinile isithembiso sayo kwaye ihlaziye i-OneDrive ngothotho lophuculo lweMac kodwa nakwi-iPhone kunye ne-iPad. Kodwa ingakumbi iiMacs zifumana uphuculo olukhulu ngokwemiqathango yamava omsebenzisi kunye nozinzo. Into entle kukuba iOS ufumana ukufikelela ngcono. Njengoko besithi Win-Win.
IMac OneDrive entsha ibonelela ngamava angcono omsebenzisi, ukuhambelana kosetyenziso oluphuculweyo, kwaye ikhuseleke ngakumbi kwaye isebenziseka lula kuneenguqulelo zangaphambili. Inkampani ifudukele kwi-OneDrive yaya kwiqonga lomboneleli weefayile likaApple, okuthetha ukuba iMicrosoft 365 yenkonzo yokugcina kwi-intanethi. isebenza ngcono kakhulu kwaye inikezela ngeempawu ezingaphezulu.
amava amatsha Iifayile ezifunekayo kwiiMacs usebenzisa i-macOS 12.1 okanye kamva sele iyinyani. Itekhnoloji entsha esekelwe kwiqonga loMboneleli weFayile ye-Apple idityaniswe ngcono kakhulu kunye nenkqubo yokusebenza xa kuthelekiswa nohlobo lokuqala. Oku kuthetha amava angcono omsebenzisi, ukuhambelana okungcono kwesicelo, kunye nokuthembeka okungcono. Kodwa ikwavumela iMicrosoft ukuba ibonelele ngezinto ezintsha, ezinje ngeFolder eyaziwayo iHambisa.
Amava amatsha eFayile akwiMfuneko afuna iMacOS 12.1 okanye kamva. Le nguqulo iya kuba inguqulelo yamva nje exhaswayo. Oku kuthetha ukuba izixhobo ziya kufudukela ngokuzenzekelayo kwiiFayile ezintsha ezifunwayo kamsinya nje zakufumana uhlaziyo oluvela kwi-macOS.
Kancinci kancinci sibona indlela izicelo ezifumana ngayo ukuhambelana kwemveli kunye neeprosesa ezintsha zeApple. Into ebaluleke kakhulu ukuze xa bona zibulawa, yenze ngeyona ndlela ikhawulezayo kunye neyona nkcitho isezantsi yamandla, ngaloo ndlela kuzuzwa impumelelo enkulu kunye nempumelelo. Namhlanje sinezicelo ezimbini esele zihambelana, DropBox kunye ne-OneDrive.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Ezinye iiNkqubo zeMac » IMicrosoft OneDrive ngoku isebenza ngokwemveli kwiiMac M1s
I-TSMC yenza umbulelo ongazenzisiyo kwi-Apple
Thatha ithuba lokubonelela ngeApple kubafundi beekholeji